Miss Hong Kong 2020 အလှမယ် သရဖူကို ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ သူနာပြု ဆရာမလေး Lisa – Myanmar
Miss Hong Kong 2020 အလှမယ် သရဖူကို ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ သူနာပြု ဆရာမလေး Lisa
September 11, 2020 admin Cele, Entertainment, News 0
ဗြိတိန်မှာ မွေးတဲ့ သူနာပြု ဆရာမ Lisa Marie Tse က တော့ (၂၀၂၀)ခုနှစ်ရဲ့ Miss Hong Kong အလှမယ် ဖြ စ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကို တော့ (၁၉၉၅)ခုနှစ်က စ ကော့တလန် မှာေ မွးဖွားခဲ့တာပါ။သူမက တော့ (၄၈)ကြိမ် ေြ မာက် ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Miss Hong Kong အလှမယ် ပြိုင်ပွဲ မှာ တော့ အလှမယ် အဖြစ် သရဖူ ဆောင်းခဲ့တဲ့ အပြင် ‘Miss Photogenic’. ဆုကိုပါ ရခဲ့ပါတယ်။ဒီအ ကြောင်းကိုတော့ Daily Mail နဲ့ ibtimes.sg တို့ မှာ ဖော်ပြထားတာပါ။
Red roses represent true love and desire whereas pink represents passion, joy of life, youth and energy. Thank you to @sasahk_official for the bouquet that symbolises my experience in Miss Hong Kong!
A post shared by 謝嘉怡 Lisa-Marie Tse (@lisamarie_tse) on Sep 3, 2020 at 2:06am PDT
သူမက တော့ အရင် က သူနာပြု ဆရာမ ဖြစ်ပြီး အခုအောင်မြင် မှု က တော့ သူမရဲ့ အိမ်မက် တွေ တကယ် ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အရင် တည်းက သူမက သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး တစ်ယောက် အဖြစ် နဲ့ အနုပညာလောက ထဲကို ဝင်ရောက်ချင် ခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Lisa ရဲ့ မေ မေ က တော့ စ ကော့တစ် ဖြစ်ပြီး အ ဖေ က တော့ ဟောင် ကောင်ပါ။သူမရဲ့ အောင်မြင်မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Lisa က လွန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် အနည်းငယ် တုန်းက အရမ်း အလုပ်ရှုပ် ခဲ့ေ ကြာင်း၊ဒါ ပေမယ့် သူ မ အတွက် တော့ အံ့ သြစရာ ကောင်းတဲ့ သီတင်းပတ် ဖြစ်ခဲ့ ကြောင်း၊အများကြီး သင်ယူ ယူလိုက် ရ ကာ သူမကို အားပေးတဲ့ သူတွေ မပါ ပဲ နဲ့ အခုလို လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ နောက်ဆုံး စ ကားလေးမှာတော့ အ ဖေ ကျ မတို့ လုပ်နိုင် ခဲ့ပြီ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူမက တော့ အရင် က သူနာပြု ဆရာမ ဖြစ်ပြီး အခုအောင်မြင် မှု က တော့ သူမရဲ့ အိမ်မက် တွေ တကယ် ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အရင် တည်းက သူမက သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး တစ်ယောက် အဖြစ် နဲ့ အနုပညာလောက ထဲကို ဝင်ရောက်ချင် ခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Lisa ရဲ့ မေ မေ က တော့ စ ကော့တစ် ဖြစ်ပြီး အ ဖေ က တော့ ဟောင် ကောင်ပါ။
သူမရဲ့ အောင်မြင်မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Lisa က လွန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် အနည်းငယ် တုန်းက အရမ်း အလုပ်ရှုပ် ခဲ့ေ ကြာင်း၊ဒါ ပေမယ့် သူ မ အတွက် တော့ အံ့ သြစရာ ကောင်းတဲ့ သီတင်းပတ် ဖြစ်ခဲ့ ကြောင်း၊အများကြီး သင်ယူ ယူလိုက် ရ ကာ သူမကို အားပေးတဲ့ သူတွေ မပါ ပဲ နဲ့ အခုလို လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ နောက်ဆုံး စ ကားလေးမှာတော့ အ ဖေ ကျ မတို့ လုပ်နိုင် ခဲ့ပြီ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူမက တော့ ပြိုင်ပွဲမှာ ‘Shanghai Tang’ ဆိုတဲ့ တရုတ်သီချင်းကို ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ နှ လုံးသားကို သိမ်း ပိုက် ခဲ့တာပါ။သူမက တော့ စ ကော့ တစ် ဆေးရုံ တစ်ရုံမှာ သူနာပြု အဖြစ် မလုပ် ခင်တုန်းက Edinburgh Napier တက္ကသိုလ် မှာ ဘွဲ့ ရခဲ့တာပါ။” ကျမ အသက် ၁၇ နှစ် တုန်းက အ ဖေ က ဟောင် ကောင်ကို လာပြီး Miss Hong Kong အလှမယ် ပြိုင်ပွဲ ဝင် ဖို့ အားပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့် အဲ့ တုန်းက ကျမ က စိတ် မဝင် စားဘူး လေ။စ ကော့တလန် မှာက သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီး ရှိတယ်.” လို့ ဆိုပါတယ်။
ရောဂါကြောင့် အမျိုးသားကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အမွေးအမျှင်တွေထွက်လာတဲ့ အမျိုးသမီး (ဗွီဒီယိုဖိုင်)